ခရီးသွားလမ်းညွှန်များယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ Duty Template ကို – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / ခရီးသွားလမ်းညွှန်များယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ Duty Template ကို
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized4မှတ်ချက်များ 428 views
မဟာဗျူဟာ, ညီညာစေ, နှင့်ခရီးဝေးခရီးလုပ်ဆောင်, ခရီးသွားမှတ်တမ်း, နှင့်ရှေးရှေးနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်ခရီးစဉ်.
Program ကိုအလည်အပတ်ခရီးစဉ်, တည်နေရာက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အားလပ်ရက်နည်းလမ်းနားလည်မှုအသုံးချဖို့.
နေရာထိုင်ခင်းနှင့်အတူမည်သည့်ပြဿနာမျှဖြေရှင်းရန် , ထောက်ပံ့, သို့မဟုတ်ခရီးစဉ်.
ထိုကဲ့သို့သောဥပမာခန်းများအတွက်အဖြစ်တောင်းဆိုခြင်းအလည်အပတ်သို့မဟုတ်ခရီးစဉ်အသေးစိတ်ကို, တင်ဆောင်, ပစ္စည်းကရိယာ, လည်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုထမ်းရန်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း.
က်ဘ်ဆိုက်သောအရပ်တို့ကိုမ excursion နှင့်အကျိုးစီးပွားအချက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်အုပ်စုများကိုလမ်းညွှန်.
အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ဝယ်ယူမှုနှင့် ပတ်သက်. အကြံပြုချက်များပေး.
ထိုကဲ့သို့သောဥပမာဗီဇာများအတွက်အဖြစ်ပါမစ်များနှင့်စာတမ်းများရတဲ့အတွက်အကူအညီများကို အသုံးပြု. ခရီးသွားများအတွက်ပေး, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ, နှင့်ကျန်းမာရေးစက်များ, နှင့်ငွေကြေးကိုအသွင်ပြောင်းအတွက်.
ထိခိုက်လူတန်းစားတစ်ဦးချင်းစီမှ firstaid ပေး.
မြင့်တက်မဟာဗျူဟာအတွက်အရင်ကဆိုရင်ပြရန်, ပြင်ပတွင်, နှင့်သစ်တောအရေးပေါ်, ရှာဖွေနေနှင့် display ကိုအသုံးပြုမှု, ထောင့်, နှင့်တောင်တက်ထုတ်ကုန်.
ငှား devices များ, အဝတ်ကို, နှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဆက်စပ်-မှလေ့လာရေးခရီးသွားပေး.
အခြားအ-လူတွေကိုလက်ရှိပြောနေကြသည်အရာကိုတစ်ခုလုံးကိုအသိအမြင် active-နားထောင်ခြင်း-ကမ်းလှမ်း, သင်အချက်များဖန်တီးထားကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အတှကျအခြိနျလာပြီ, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးခွန်းတွေမေး, နှင့်လက်မခံနိုင်အချိန်လေးမှာကြားဖြတ်မဟုတ်.
ထိထိရောက်ရောက် data တွေကိုဖော်ပြတခြားသူတွေနဲ့ chatting-စကားပြောဆိုနေခြင်း.
အားနည်းချက်များကိုနှင့်နည်းစနစ်များ၏အားသာချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ယုတ္တိဗေဒနှင့်အကြောင်းပြချက် critical-အတွေးအခေါ်-အသုံးချပြီး, ရလဒ်များကိုသို့မဟုတ်ကိစ္စများမှအခြားရွေးချယ်စရာအဖြေကို.
သို့ချဉ်း ကပ်. -အလုပ်သင်ယူခြင်းနှင့်အခြေအနေကသင်ကြားမှုသို့မဟုတ်သည့်အခါသစ်ကိုကိစ္စများကျွမ်းကျင်တငျပွ trainingPERinstructional မဟာဗျူဟာများနှင့်နည်းလမ်းများကိုရွေးချယ်ခြင်း.
မိမိကိုယ်ကို၏စစ်ဆေးခြင်း-MonitoringANDEvaluating ထိရောက်မှု, အပိုဆောင်းဖြစ်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်များ, သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများကုစားခြေလှမ်းများကိုစဉ်းစားသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုထုတ်လုပ်ရန်.
လူမှုအခြားသူများကိုသတိထားအမြင်-ဖြစ်ခြင်း’ သဘောထားတွေကိုသူတို့ reply ဘယ်ကြောင့်သူတို့ကလုပ်ပေးနေချိန်မှာနားလည်နိုင်မှုရှိစေရန်.
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. Dexter-မွမ်းမံလုပ်ရပ်များ’ လုပ်ရပ်များ.
Service ကိုအရှေ့တိုင်းဆန်-Active ရှေးရှေး enable လုပ်ဖို့ချဉ်းကပ်ရှာဖွေနေ.
လုပျထုံးလုပျနညျးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း-စစ်ဆေးတဲ့ item လိုအပ်ချက်နှင့်တစ်ဦးစတိုင်ထုတ်လုပ်လို.
တပ်ဆင်နေ-Installing ထုတ်ကုန်, devices များ, ဝါယာကြိုးများ, သတ်မှတ်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်အစီအစဉ်များ.
အတော်ကြာဖြစ်ကြောင်းအသုံးပြုမှုနှင့်စပ်လျဉ်း encoding-ထုတ်ဝေကွန်ပျူတာ packages များ.
ခြေရာခံခြင်းသည်-လေ့လာခြင်း features တွေစစ်ဆင်ရေး, ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, သို့မဟုတ်နောက်ထပ်လက္ခဏာများကိရိယာစနစ်တကျအလုပ်လုပ်စေရန်.
ပစ္စည်းကိရိယာ tools များအပေါ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဝန်ဆောင်မှုအကို Maintenance-ကွပ်မျက်အခါဖော်ထုတ်.
ပစ္စည်း၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးအကဲဖြတ်-ဖျော်ဖြေစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေနှင့်စမ်းသပ်မှုများ, န်ဆောင်မှုများ, သို့မဟုတ်နည်းစနစ်ဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သို့မဟုတ်ထိရောက်မှုအကဲဖြတ်ဖို့.
အဆိုပါဝန်းကျင်မှာ analysis-ဆုံးဖြတ်ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲများ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, အခွအေနနှင့်အတူရလဒ်တွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီး technique ကိုအဘယျသို့သောလုပ်ဆောင်သင့်တယ်.
နည်းလမ်းများအားသုံးသပ်ခြင်း-ခွဲခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ် system ကိုစွမ်းဆောင်ရည်၏လက္ခဏာများအဖြစ်သင့်လျော်သောသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်စေရန်လိုအပ်သောအစီအမံများ, အဆိုပါစနစ်၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ.
ဘဏ္ဍာရေးအရင်းအမြစ်များ-ဖော်ထုတ်ခြင်းဝင်ငွေတာဝန်ပြီးစီးရကုန်လိမ့်မည်မည်သို့စီမံခန့်ခွဲမှု, နှင့်စာရင်းကိုင်သည်ဤအသုံးစရိတ်များနှင့် ပတ်သက်..
ပစ္စည်းများ၏အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုများ-ရယူနှင့်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ၏သင့်လျော်အသုံးချဘို့ကိုမြင်လျှင်, န်ဆောင်မှုများ, နှင့်သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ operate.
ဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-directing သူတို့အဖြစ်လူများ၏အုပ်ချုပ်ရေး, အဆောက်အဦး, နှင့်စွမ်းရည်ကိုလှုံ့ဆော်ဖို့, အဆိုပါကျူးကျော်များအတွက်အထိရောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များကိုဖျောထု.
တချို့ကဌာန Programs ကို
အကြီးတန်းကျောင်းဘွဲ့ (သို့မဟုတ် GED သို့မဟုတ်မြင့်မားသော-ကျောင်းနှင့်ညီမျှစာရွက်စာတမ်း)
ကျော်လွန်6ရက်သတ္တပတ်, 1-တစ်နှစ်မှတက်နှင့်အပါအဝင်
ဆုံးဖြတ်ချက် – 90.79%
အာဏာ – 86.27%
ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး – 89.35%
အခြားသူများနှင့်စပ်လျဉ်းကိစ္စ – 79.91%
လူမှုအရှေ့တိုင်းဆန် – 88.49%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 86.09%
စိတ်ဖိစီးမှု Threshold – 89.63%
customization / Mobility ကို – 93.58%
မှီခို – 93.24%
Depth ၏အသိအမြင် – 94.80%
ခွန်အား – 89.35%
လွတ်လပ်ရေး – 77.61%
တီထွင်ဖန်တီးမှု – 98.05%
analytical အတွေးအခေါ် – 89.78%
ဧပြီလ 28, 2019 တွင် 6:07 ညနေ
ဧပြီလ 30, 2019 တွင် 12:38 ညနေ
Pingback: How To Streamline Organization Using Work Flow Maps - Hawaii Student Housing & Suites | Apartments for rent in HonoluluHawaii Student Housing & Suites | Apartments for rent in Honolulu
Pingback: How Uncover Nurse Practitioner Jobs| | မွေပွငျအောကျလမျး